𝐌𝐚𝐝𝐚𝐬𝐡𝐚 𝐗𝐢𝐬𝐛𝐢𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐞 𝐒𝐨𝐨𝐦𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐲𝐚𝐚 𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐃𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐡𝐚𝐜𝐚 – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐬𝐡𝐚 𝐗𝐢𝐬𝐛𝐢𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐞 𝐒𝐨𝐨𝐦𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐲𝐚𝐚 𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐃𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐡𝐚𝐜𝐚
War-Saxaafadeed goordhawayd ka soo baxay Madasha Xisbiyada Qaran ayaa walaac looga muujiyay dagaallada sokeeye ee soo noqnoqday ee ka dhacaya deegaannada Soomaaliya.
Madashu waxay sheegeen inay u taagan tahay nabad u raadinta dadka iyo dalka Soomaaliya, iyagoo xustay in gacmo siyaasadeed uga muuqdaan dagaallada soo noq-noqday ee ka dhacaya deegaanno kala duwan oo dalka kamid ah.
leh ee kicin kara ama dhaawici kara dareenka dadka iyo ka baaqsashada hurinta colaadaha” ayaa lagu yidhi War-Saxaafadeedka Madasha ka soo baxay.
“Madasha waxay sheegeen siday uga xun tahay, uga soo horjeeddo, una cambaareyneyso falalkii arxan darrada ahaa ee lagu xasuuqay Muwaaddiinniinta Soomaaliyeed ee lagu laayay deegaanka Gololey ayaa dalbatay in cadaaladda la hor keeno raggii darayska ciidamada qaranka ku labisnaa ee dhakhaatiir arxan darrada u dilay.
Madashu waxay uga digtay abaabulka shirar lagu hurinayo colaad iyadoo is hor taageysa shirar bulsho oo danaha dadka iyo dalka looga tashanayay, waxaana si toos ah dowladda fedraalka loogu eedeeyey dagaalladii ka dhacay Muqdisho, Sh/Hoose, Sh/dhexe, J/Hoose, Hiiraan, Galguduud, Mudug, iyo degmooyin kamid ah Dawlad Deegaanka Soomaalida gaar ahaan degmooyinka Raaso, Sallaxaad, Doollo iyo qaybo kale oo kamid ah Dawlad Deegaanka Soomaalida.
Gaba gabadii waxay Madasha Xisbiyada Qaran ugu baaqday hoggaanka dawlada farmaajo inuu joojiyo dagaallada siyaasadeed iyo midka ciidan ee ka dhan ah dawlad goboleedyada, waxaana farriinta u dambeysa lala wadaagay wax garadka Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyada oo loogu baaqay inay u istaagaan doorkooda ku aaddan daminta colaadaha sokeeye.
Halkan hoose ka aqriso mowqifka Madasha Xisbiyada Qaran ee ku aadan dagaallada siyaasadeed ee dowladda dhexe hurinayso iyo colaadaha ka jira dhulka Soomaalida.‬